Global Aawaj | साथीहरुले विश्वास गरे संगठनको नेतृत्व लिन तयार छु : उपाध्यक्ष कुँवर साथीहरुले विश्वास गरे संगठनको नेतृत्व लिन तयार छु : उपाध्यक्ष कुँवर
साथीहरुले विश्वास गरे संगठनको नेतृत्व लिन तयार छु : उपाध्यक्ष कुँवर
नेपालको विद्यार्थी संगठनमा पूरानो संगठनमा पर्छ अखिल छैठौं । नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छैठौंको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन भोलि शुक्रबारदेखि बुटवलमा शुरु हुँदैछ । ‘राष्ट्रियताको रक्षा र मौलिक अधिकारको लागि हाम्रो आन्दोलन, वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षाका लागि बाइसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन’ मूल नाराका साथ हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा रहेर केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरसँग गरिएको कुराकानीः
बुटवलमा हुने सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ?
–सम्मेलनको तयारी पूर्ण रुपमा तयारी भइसकेको छ । देशैभरका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक आउनेक्रम शुरु भएको छ । सम्मेलन स्थल बुटवलमा हल व्यवस्थापन, आवास र अतिथि व्यवस्थापनसँगै सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेको छ । हामी एक प्रकारले पूर्ण रुपमा तयारी भइसकेका छन् ।
कोभिड महामारी कायमनै रहेको अवस्थामा सम्मलेन गर्दै हुनुहुन्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
–स्वास्थ्य मापदण्डका हिसाबले हामी सचेत भएर नै अहिले बन्द कोठाभित्र कम मानिसहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौं । सम्मेलनको उद्घाटन हजारौँ विद्यार्थीको साथमा जुलुससहित खुला मैदानमा गर्नुपर्ने थियो । तर, यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी हामीले बन्दहलमा प्रतिनिधिको बीचमा मात्र सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर नै यो सम्मेलन सम्पन्न गर्दै छौँ ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकको उपस्थिति कसरी हुँदैछ ?
यो हाम्रो इतिहास बोकेको संगठन हो । त्यसैले सम्मेलनमा देशैभरबाट सहभागी हुनका लागि साथीहरुको ठूलो उत्साह छ । यो पटक कोभिड महामारीका कारण हामीले प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी गराउदैछौं । यो पटक ६५ भन्दा बढी जिल्लाबाट ३ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकरूको सहभागिता हुने छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
असोज २२ गते हामीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने छौँ । उद्घाटन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गर्नुहुने छ । अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलगायत हाम्रो पार्टी निकट विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिहरूको पनि आतिथ्यता रहने छ । असोज २३ बन्दसत्र सुरु हुने छ । बन्दसत्रमा समग्र रिपोर्टिङ, राजनैतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ । प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सामूहिक छलफलसहित प्रतिवेदन पास गर्ने छौँ । असोज २४ गते साँझसम्म नयाँ नेतृत्वसहित सम्मेलन समापन गर्ने योजना रहेको छ ।
वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य समस्याहरू के कस्ता देख्नुहुन्छ ?
–विद्यार्थी आन्दोलनमा वैचारिक समस्या छन् । राजनीतिक पार्टीका गतिविधिले समस्या पारिरहेका छन् । २०६२–६३ सालभन्दा अगाडि सत्ताको बागडोर कुनै एउटा व्यक्तिको हातमा थियो । अनि, हामीलाई आन्दोलन र विरोध गर्न सजिलो थियो तर त्यसपछि राजनीतिक पार्टीको हातमा सत्ता परेपछि त्यसको प्रभाव विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि परेको छ ।
जुन पार्टी सत्तामा जान्छ, त्यो आस्थासँग नजिक रहने विद्यार्थी सङ्गठन सत्तापक्ष बन्छ । यसरी पहिलेको प्रतिपक्षी सङ्गठन सत्तापक्ष बन्ने गरेको छ । यो एउटा समस्या हो । सामान्यतः विद्यार्थी सङ्गठनले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिले पनि शैक्षिक क्षेत्रलगायतका विविध क्षेत्रमा समस्या छन् । सङ्गठनको यही समस्याको कारण संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
–आन्दोलन विविध विषयलाई समेटेर अगाडि बढिरहेको छ । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका विरुद्ध पनि एकल वा संयुक्त रूपमा हामीले आन्दोलन गरेका छौँ । राष्ट्रघाती एमसिसी विरुद्ध पनि हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।
तपाइँहरूले महासचिवले सम्मेलनको संघारमा संगठन नै परित्याग गर्नुभयो । यसले तपाइँहरूको सङ्गठनलाई केहि प्रभाव पारेको छ र ?
–हामीलाई कुनै पनि प्रभाव परेको छैन । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उहाँकै प्रदेश जिल्लामा सम्मेलन भेला भइरहेका छन् । त्यही प्रदेशबाट पनि सम्मेलनमा सयौँको संख्यामा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी हुने छन् । त्यसले पनि के पुुष्टि गर्छ भने उहाँले संगठन परित्याग गर्दैमा कुनै प्रभाव परेको छैन ।
महासचिवको राजीनामाले त पार्टीमा जसरी समानान्तर कमिटि गठन भइरहेको छ, त्यस्तै अवस्थाका रुपमा पनि चित्रण गरिएको छ नि ?
–त्यस्तो होइन । उहाँले राजनीतिक हिसाबले छलफल गर्ने हो । तर उहाँ आफैले राजीनामा दिनुभयो । सायद उहाँमा विचारको हिसाबले बस्न नसक्ने ठान्नुभयो होला । उहाँको राजीनामाले विद्यार्थीमा विवाद छ भन्ने कुरा काँहि कतै पनि छैन । अखिल छठौं एकताबद्ध छ । राष्ट्रियताको सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौं । र २२ औं सम्मेलनले जुझारु नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
तपाई अखिल छैठौंको केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी हुँदै अहिले केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुभएको छ । अबको नेतृत्वमा तपाइँको आकांक्षा के छ ?
–स्वभाविक रुपमा नेतृत्वको बिषय भनेको हाम्रो लागि महत्वको होइन । मूल रुपमा संगठन ठूलो कुरा हो । बन्दसत्रको हलले गर्ने निर्णय नै मान्य हुन्छ । म केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको हिसाबले अध्यक्षको रुपमा चर्चा हुने कुरा स्वभाविक हो । म संगठनलाई विश्वास गर्छु । संगठन र साथीहरुले विश्वास गरे म नेतृत्व लिन तयार छु ।